Isalathiso: Uhlalutyo loMthengi ngeeNkcukacha eziNokwenzeka | Martech Zone
Isalathiso: Uhlalutyo loMthengi olunokuqonda okusebenzayo
Idatha enkulu ayisasebenzi kwishishini. Uninzi lweenkampani lucinga ngokwazo njengokuqhutywa kwedatha; iinkokheli zetekhnoloji ziseta ukuqokelelwa kwedatha, abahlalutyi bahluza idatha, kwaye abathengisi kunye nabaphathi beemveliso bazama ukufunda kwidatha. Ngaphandle kokuqokelela kunye nokulungisa idatha ngakumbi kunangaphambili, iinkampani zilahlekile ukuqonda okubalulekileyo malunga neemveliso zazo kunye nabathengi bazo kuba abazisebenzisi izixhobo ezifanelekileyo ukulandela abasebenzisi kulo lonke uhambo lwabathengi okanye kungenjalo benza ikopi yedatha kwaye bazisa iimpazamo kuhlalutyo lwabo.
Kuxhomekeke kwisihloko esithile, umbuzo omnye owakhiwe kwi-SQL ungathatha ngaphezulu kweyure ukuya kwikhowudi kunye nokufumana kwakhona. Imibuzo ye-Ad hoc iyasokola ukuvelisa uhlalutyo lwabathengi olusebenzayo kuba impendulo yombuzo wakho wokuqala inokuba ngomnye umbuzo. Ufunda ukuba ngaphezulu kwe-50% yabathengi abacofa kwiqhosha lakho le-CTA bafumana indlela yabo kwiphepha lokubhalisa, kodwa ngaphantsi kwe-30% yabo bathengi benza iprofayile yomsebenzisi. Ngoku kuthweni? Lixesha lokuba ubhale omnye umbuzo kwi-SQL ukuqokelela esinye isiqwenga sephazili. Uhlalutyo akufuneki lube ngoluhlobo.
Isalathiso liqonga elikhokelayo lokuHlola kwabaThengi elenza ukuba amaqela eemveliso kunye nedatha ahambele ngaphaya kwemida yezixhobo zeBI zemveli zokwenza izigqibo ngokuqonda indlela yokuziphatha komsebenzisi kuyo yonke indawo yokubamba. Isalathiso kuphela esiqhagamshela ngokuthe ngqo kwindawo yogcino lwedatha yakho, ekungafuneki ukuba iphindaphindwe, kwaye sixhobisa abasebenzisi beshishini ukuba baphendule imibuzo enzima yabathengi ngaphandle kokuxhomekeka kumaqela edatha okanye kwi-SQL. Abaphathi beemveliso kunye nabathengisi banokuqhuba imibuzo efanayo ngemizuzwana enokuthi ithathe abahlalutyi beenkcukacha ngeekhowudi. Ukuqonda kwedatha okusebenzayo amanyathelo amathathu amancinci kude.
Inyathelo 1: Chaza iinjongo zeShishini lakho kunye neMetriki
Ukwakha imodeli yedatha esebenzayo, kufuneka uqale uchaze iinjongo zeshishini lakho kwaye usebenzise iimeko. Uhlalutyo loMthengi lwenzelwe ukuqhuba izigqibo zemveliso kunye namaqela entengiso, ke sebenzela umva kwiziphumo onethemba lokuziphumeza. Iinjongo kufuneka zihambelane neenjongo eziphambili zeshishini. Isalathiso sinokulinganisa isimilo sabo bonke abasebenzisi, abasebenzisi abazimeleyo, kunye nayo yonke into ephakathi, kungoko kufanelekile ukulandelela izikhombisi kumanqanaba amaninzi. Emva koko, misela iimetrikhi kunye nee-KPIs ezinokukuxelela ukuba uyaphumelela. Eminye imizekelo yezi inokuba:
Yongeza ukuguqulwa komsebenzisi omtsha
Nciphisa umrhumo werhafu
Chonga ezona ndlela zakho zentengiso zisebenzayo
Fumana amanqaku obundlobongela ekuhambeni kwakho ebhodini
Nje ukuba uzinze kwinjongo, yakha umbuzo onethemba lokuwuphendula ngedatha yakho yomsebenzisi. Umzekelo, yithi ujonge ukwandisa ukwamkelwa kwento entsha yemveliso. Nayi eminye imizekelo yemibuzo onokuyiphendula njengoko uhlalutya ifanele yakho yokuzibandakanya komsebenzisi:
Ngaba abathengi beprimiyamu bayamkele imveliso ngokukhawuleza kunabasebenzisi basimahla?
Zingaphi iiqhosha okanye izikrini ezithathayo ukuze umsebenzisi afikelele kwimveliso entsha?
Ngaba ukwamkelwa kwento entsha kunefuthe elihle ekugcineni umsebenzisi kwiseshoni enye? Kwiiseshoni ezininzi?
Ukuxhotyiswa ngale mibuzo kunye nedatha ukuze uyiphendule, ungemba kumawaka ezenzo zomsebenzisi kulo lonke uhambo lwabathengi. Lungiselela ukuvavanya ii-hypotheses zakho ngokubonakalayo kwe-funnel visualizations.
Inyathelo 2: Landa uhambo lwakho loMthengi ngeNdawo yabaThengi abaNinzi
Olona phawu lubalulekileyo lubonisa Uhambo lwabaThengi abaninzi. Uhambo lwabathengi luboniswa njengefaneli ye-multipath, ebonisa ukuhamba kwabasebenzisi ngezigqibo ezahlukileyo ngaphakathi kwendawo yakho okanye usetyenziso lweselfowuni. Ukubona ngohambo kunceda iimveliso kunye namaqela entengiso ukufumanisa isimilo esithile kunye neendawo zokuchukumisa ukuqhuba ukufunyanwa kwabathengi, ukugcinwa, okanye ukukhwabanisa.
Ukwahlula ifanele ngokuqhubeka kuvumela iqela lakho ukuba lifumane amanqaku ngqo okuxubana apho abasebenzisi baphambuka kwindlela yokuziphatha abayithandayo okanye bemka kude kwimveliso iyonke. Uhambo lwabathengi oluninzi luvumela inkampani ukuba ichonge imithombo yayo ephambili yomtsalane kubathengi, isaphula iinxalenye ezithile zefaneli ukuthelekisa iihambo zabathengi ezifanayo. Amaqela emva koko anokulungelelanisa iimaphu zendlela ukujongana neengxaki ngamava omsebenzisi kwaye ajonge ukuphinda iziphumo zabathengi abafanelekileyo.
Inyathelo lesi-3: Qhuba nzulu ngamaQabane kunye neeprofayili
Nje ukuba uhlalutye iindlela abasebenzisi abazibandakanya ngayo neemveliso zakho, iqela lakho lezentengiso linokuthatha inyathelo kwimikhankaso ejolise kwabo bathengi kunokwenzeka ukuba babe nexabiso eliphezulu ebomini. Isalathiso sikuvumela ukwahlula abasebenzisi phantse nasiphi na isazisi esinokucingelwa ngophuhliso lweendlela zokuziphatha. Unokufumana:
Abasebenzisi abafumana i-imeyile yabo yokuqala yokuthengisa ngentsasa yangoMvulo kunokwenzeka ukuba babhalise kunabo bafumana unxibelelwano lwabo lokuqala kamva evekini.
Abalingwa basimahla bathambekele ekukrokreni ngaphandle kokuba bacelwe ukuba bakhumbuze ukuba ityala labo liyaphela ngosuku olulandelayo.
Ukuba iqela lakho lokuthengisa lifuna ukufumana i-granular, i-Indicative inikezela ngeeprofayili zomsebenzisi, ebavumela ukuba baphakamise ii-personas ezithile zabathengi abalungileyo. Ngaphakathi kwindawo yakho yokugcina idatha kukho ilog yazo zonke iintshukumo zomsebenzisi. Iiprofayili zomsebenzisi kwisalathiso zithatha lonke uhambo lwabathengi, ukusuka kunqakrazo lokuqala ukuya kutshanje. Amacandelo esiko kunye neecohorts zonyusa ibha yokuthengisa okwenzelwe wena.
Kukho igolide efihliweyo ngaphakathi kwendawo yokugcina idatha, kwaye ukuKhombisa kukunceda ube ngowam. Awudingi ulwazi lwekhowudi okanye ukuxabisa iziseko zedatha ukuze ufumane ukuqonda okusebenzisekayo. Konke okudingayo yimemo yedemo yokuBonisa kunye nokufikelela kwidatha yomsebenzisi wenkampani yakho.
Zama iDemo yokuBonisa
tags: biidatha yebhidibhalaIikhonkco zesikoukufunyanwa kwabathengiUhlalutyo lomthengiumthengi churnuhambo lwabathengiukugcinwa kwabathengiulwahlulo lwabathengiuphawuMultipath uhambo lwabathengiiphaneli yokuphindaphindaiiprofayili
I-WordPress: Yenza iibhola ezisecaleni ngokuzenzekelayo kwiCandelo ngalinye
Abapapashi bavumela iAdtech ukuba ibulale izibonelelo zabo